Yonke kwiPowusta ye-LED enye/yokuThengisa
Umxinwa wePixel Pitch Videowall/HD LED Screen
Umqondiso weSkrini osisigxina we-LED wangaphandle
Isiboniso se-LED sangaphandle esigcina amandla
Ngaphambili Gcina umboniso we-LED
Umboniso we-LED oNgaphakathi
Isikrini se-LED esicacileyo / iFacade Curtain LED Display
Stadium Umjikelezo Sport LED Screen
Isiboniso se-LED soMgangatho wokuDanisa oSebenzayo
Smartshelf LED Banner Bonisa
I-Flexible/Creative Soft Display LED
Umboniso weModyuli ye-LED
Izixhobo zokubonisa i-LED
Iplagi edlala ipowusta ekhokelayo
HD Umxinwa pixel pitch
Umboniso okhokelela ngaphandle osisigxina
Umboniso okhokelayo wenqanaba lokurenta
Ithegi yexabiso ekhokelwa yiSmarshelf
Isikhululo sezoThutho kunye neNtengiso yeSikhululo seenqwelomoya
Intengiso yoRhwebo kunye neHotele yoBundwendwe
ISigigaba seQonga leKonsathi yethiyetha kunye noMboniso we-LED weCawa
Usasazo lweSitudiyo seMfundo kunye neZiko loMyalelo loKhuseleko
Intengiso yangaphandle ye-LED yokuBonisa iFacade kunye nebhodi yebhilibhodi
Ibala lebala lemidlalo Umboniso weLED
Nationstar ubhedu olugcweleyo lwe-1921 chips ze-SMD zephaneli ye-aluminium yangaphandle ye-p3.91 ekhokelela eYurophu
Enye ibhetshi entsha ye-3.91 yoqwalaselo oluphezulu olukhokelela kumboniso ongaphezulu kwe-20 sqm ngokuguga kakuhle kwaye ilungele ukuhanjiswa kumthengi wethu we-EU kwakhona kule nyanga. Nationstar 1921 SMD ngocingo lobhedu iitshiphusi ze-LED yeyona nto ibalulekileyo kumgangatho wescreen esikhokelwayo. Izinga lokuhlaziya le-3840hz lizisa i-v...
Indoor HD p1.25 umboniso okhokelwayo kunye nemodyuli eqhelekileyo 320mmx160mm kwikhabhathi yendibano eguquguqukayo yendibano 640mmx640mm kunye 640mmx480mm
Indoor HD p1.25 isibonisi esikhokelwayo kunye nemodyuli eqhelekileyo 320mmx160mm ngokudityaniswa okuguquguqukayo faka ikhabhathi ekhokelwayo 640mmx640mm kunye ne-640mmx480mm kunye novavanyo lokuguga olulungele ukuya kudonga oluncinci nolungenamthungo nolucacileyo lwevidiyo ye-LED kumxhasi wethu. Ngaphezulu kwe-2.0mm ibhodi yePCB eshinyeneyo eyenziwe nge-6 l ...
I-800pcs yangaphandle i-p2.5 160mmx160mm imodyuli ekhokelwayo ye-HD ene-NATIONSTAR yokwenene yocingo lobhedu lwe-chip ehanjiswe kakuhle
I-HD yangempela yangaphandle ye-HD P2.5 eyona nto incinci ibonise imodyuli yemodyuli enezixhobo ezikhethiweyo kunye nokulawulwa komgangatho wemveliso ongenaxhala. Umboniso we-Yonwaytech we-LED wamva nje ubonelela ngaphezulu kwe-800 iiseti ze-REAL nationstar SMD1415 iingcingo zobhedu ezikhokelela kumthengi wethu kwakhona. 160mmx160mm imodyuli...
Ubuninzi be-P1.56 smartshelf ekhokelela kwibar yexabiso lethegi phantsi kokuguga kakuhle ilungele ukuhanjiswa kubathengi bethu.
ngu admin on 21-10-18
Ubuninzi be-smartshelf ekhokelela kwibha yethegi yexabiso phantsi kokuguga kakuhle ilungele ukuhanjiswa kubathengi bethu. I-P1.56 ene-600mm, 900mm, 1200mm ezahlukeneyo zobungakanani obudityanisiweyo bofakelo ukuhambelana neemfuno zobude beshelufu yemarike. I-COB entsha (i-Chip kwiBhodi) isicelo sokubonisa i-LED kwivenkile enkulu, esona sigqibo...
Ngaphezulu kwe-3000pcs if3.076-3216 imodyuli ekhokelwayo ebonisa imveliso enemveliso kunye nokuguga kunikezelwe
Inkqubela phambili yemveliso ye-if3.076-3216 iholele imodyuli ngaphezu kwe-3000pcs impendulo kumxhasi wethu ngexesha elifanelekileyo. Ucingo lwekhopha olukhokelela kwitshiphu emnyama enombala ophakamileyo wemodyuli ekhokelayo imaski izisa ukusebenza kwevidiyo okuhambelana nombala. Intlama ye-welding solder esemgangathweni kunye ne-SMT echanekileyo ngokusisiseko im...
I-P1.56 Umboniso we-HD we-LED emxinwa wePixel Pitch Fine Pitch LED Videowall
I-Yonwaytech p1.56 yangaphakathi HD isiboniso esikhokelela ekugqityweni kwaye sikhanyise ngogunyaziso lomthengi wethu kwiholo yabo. 15X9 iiseti 600mmX337.5mm p1.56 pitch pitch emxinwa 16:9 led panel kunye eludongeni ingenamthungo inyuswe. Isisombululo se-4K 5760dotsX1947dots qinisekisa ukuba ...
P1.95 Ngaphakathi Slim LED Bonisa 500mm×500mm Commercial Digital LED Screen
Ngaphezu kwe-300pcs 500mm x 500mm p1.953 yangaphakathi pitch encinci ekhokelela kwiscreen esiphantsi kokwaluphala. Iitshiphusi zegolide zeNationtar zegolide ezilungiselelwe unikezelo lwamandla oluqinisekisiweyo lwe-CE kunye ne-3840hz izinga lokuhlaziya lizisa isidlo sevidiyo esicacileyo. 500mm x 500mm x 60mm udonga lufakwe ngokuthe ngqo ukukhanya okukhokelela kwipaneli ye-LED. Imodyuli...
Umgangatho ogqwesileyo womboniso we-P3.91 okhokelwayo wangaphandle kunye nenkonzo ethembekileyo inokufanela ukuthenjwa ngumxumi
Umgangatho ogqwesileyo womboniso we-P3.91 okhokelwayo wangaphandle kunye nenkonzo ethembekileyo inokufanela ukuthenjwa ngumxumi. Ngaphezulu kwe-60 iiseti zangaphandle ze-p3.91 ezikhokelela kumboniso olungele ukuhanjiswa kumthengi wethu waseMexico. Nationstar 1921 SMD ngocingo lobhedu iitshiphusi ze-LED zezona zinto zibalulekileyo...
I-P1.8 / P2.0 / P2.5 Inkonzo yaNgaphakathi yeNkonzo yaNgaphandle ye-LED Isiboniso sePosta kwaKwangoko.
ngu admin ngo 21-07-09
Kwixesha langoku, wonke umdlali wedijithali ujonge isiboniso esiphezulu esikhokelwayo kuba imini nosuku itekhnoloji yokubonisa i-LED kunye nemfuno yentengiso yokubonisa iye yanda. I-P2.5 yangaphakathi yeNkonzo yangaphakathi ye-LED Poster isiboniso iye yathandwa kakhulu ngenxa yesisombululo sayo esiphezulu kunye nokuqaqamba. Yi ...
I-20 ibeka iplagi ephezulu kunye nokudlala ipowusta ekhokelwa yidijithali enevidiyo ecacileyo yokuguga elungele ukuhanjiswa.
I-20 ibeka iplagi ephezulu kunye nokudlala ipowusta ekhokelwa yidijithali enevidiyo ecacileyo yokuguga elungele ukuhanjiswa. Iqwalaselwe ngeetshiphusi ezithembekileyo ze-nationtar copper led kwi-pedestal yevili eshukumayo inokushukunyiswa lula ngesandla esinye (Isibiyeli sangasemva esixhomekeke ekumeni ngokuzikhethela). P2.5mm kwi80″ 640mm×1920mm r...
IP65 yovavanyo lokuqinisekisa amanzi kunye novavanyo lokungcangcazela ngempama ukuqinisekisa umgangatho okhokelwayo kumthengi wethu.
Ubungqina obulula kodwa obusebenzayo bamanzi kunye nendlela yokuvavanya ukungcangcazela ukuqinisekisa ukuba isiboniso sethu se-LED se-p3.91 sangaphandle sinokuhanjiswa kubathengi bethu baseYurophu ngokugqibeleleyo. Njengoko usazi ukuba isiboniso se-LED ngakumbi isiboniso esikhokelela kwirenti yangaphandle. Ijongene nokufakela okuninzi kunye nokuchithwa...
Indlela elula kodwa esebenzayo yovavanyo yokuqinisekisa ukuba isiboniso sethu se-LED se-p3.91 sangaphandle sinokuhanjiswa kubathengi bethu baseYurophu ngokugqibeleleyo.
ngu admin nge 21-06-14
Ngaphezulu kwe-50 sqm P3.91 uqwalaselo oluphezulu olukhokelela kwisiboniso esilungele ukuhanjiswa kumthengi wethu we-EU kwakhona kule nyanga. Nationstar 1921 SMD ngocingo lobhedu iitshiphusi LED yeyona nto ibalulekileyo kumgangatho led screen. Izinga lokuhlaziya le-3840hz lizisa isidlo sevidiyo esicacileyo. Isiqinisekiso se-CE ...
Indawo: Uluntu lwaseYutang, iSithili saseGuangming, iShenzhen, iPR China
Iqela leNtengiso: +86 138 2358 7729
(WhatsAPP & Wechat Iyafumaneka)